Somaliska - Iswiidhan cusub - Arbetsförmedlingen
> Somaliska - Iswiidhan cusub
Gargaarka aad heleyso adiga ku cusub Iswiidhen
Xafiiska shaqada ayaa ku siinayo gargaar adiga ku cusub Iswiidhen, si aad shaqo u hesho oo aad isla markaana uga mid noqoto bulshada iswiidhishka.
Wuxuu ka kooban yahay boggan
Waxyaabahan ayaan kaa caawin karnaa
Warbixinta adiga marka dhow helay sharciga deggenaashaha
Warbixinta adiga magan-galyo doonka ah
Ma u baahan tahay gargaar si aad uga qeyb qaadato howlaheena?
Adeeggeena ayaa loogu tala galay dhamaan dadka shaqo doonka ah ee Iswiidhen, kuwaasoo xaq u leh iney ka shaqeeyaan halkan. Waxa lagaa caawin karaa matalan inaad:
hesho shaqooyinka banaan
hesho casharada iswiidhishka ah
hesho waxbarasho kugu haboon
tijaabiso xirfadaha si aad u tusiso waxaad taqaan
ogaato sidey tahay ka shaqeynta iyo ku noolaashaha Iswiidhen
hesho talada meesha Iswiidhen ka mida ee aad ka heleyso fursad shaqo.
Mar dhow ma heshay sharciga deggenaashaha?
Haddii aad mar dhow heshay sharciga deggenaashaha waad nala soo xiriiri kartaa. Waxaad xaq u leedahay adeeg la mida kan aan siino dhamaan dadka shaqo doonka ah ee Iswiidhen.
Shaqo baraaktiik ah ee adiga heysta sharciga deggenaashaha
Haddii aad deggen tahay mid ka mida degaanada Wasaaradda Socdaalka oo aad heshay sharciga deggenaasha, waxaad leedahay fursad ah inaad sameyso shaqo baraaktiik ah. Si aad baraaktiiga u sameyso waa inaad heysataa tobanka lambar ama lambar isku dubarid (samordningsnummer).
Adiga heysta sharci deggenaasho ee qaxootinimo, heysta sharci magangalyada baahne ama ah ehel la keenay
Haddii aad heysato sharci deggenaasho ee qaxootinimo, heysata sharci magangalyada baahne ama tahay ehel la keenay sadaxdi sanoo ugu danbeysay waxad xaq u yeelan kartaa gargaar qaas ah, oo loogu yeero waxqabadka dib u dajinta. Waxqabadka dib u dajinta waxey loogu tala galay si aad adigu sida ugu dhaqsaha badan leh ee suura gal ugu barato afka Iswiidhishka, ugu hesho shaqo isla markaana u deberto masruufkaada. Filinkan hoose waxad ku ogaan doontaa wax intaa dhaafsan ee ku saabsan sidaan kuu caawin karno iyo sida uu u shaqeeyo waxqabadka meeleyntu.
Adiga helay sharciga deggenaashaha ee joogtada ah
Haddii aad heshay sharci deggenaasho ee joogto ah waxad ka aqrisan kartaa wax badan oo ku saabsan arintan iyo sidey kuu saameyn doonto bogga internetka ee Wasaaradda Socdaalka.
Wixi ku saabsan sharciga deggenaasha ee joogtada ah bogga internetka ee Wasaaradda Socdaalka
Waxqabadka iyo barnaamijka
Adiga xaqa u leh waxqabadka dib u dajinta waxad kalood xaq u leedahay gargaar nooc kale ah ee dhankeena si aad sahal shaqo ugu hesho. Halkan hoose waxad ka heleysaa liiska qaar ka mida gargaarada quseeya adiga mar dhow soo galay dalka. Nala soo xiriir si aad u ogaato waxa saxa ah ee adiga ku quseeya.
Jid-marka shaqada [instegsjobb] waa taageero gaar ah oo shaqada lagu helo
Taageerada adeega dheeraadka ah (Extratjänst)
Tababarka shaqada (Arbetspraktik och yrkeskompetensbedömning)
Tababar shaqo oo horjooge leh (Arbetsträning med handledare)
Shaqo-bilaabid cusub (Nystartsjobb)
Hawlgalka saldhig-sannadeedka (Praktiskt basår)
Taageerada hirgelinta dhaqdhaqaaqa ganacsashada (Stöd vid start av näringsverksamhet)
Ma waxaad tahay magan-galyo doon sugayo jawaab ku saabsan sharciga deggenaashaha?
Markaad Iswiidhen ka codsato magan-galyo waxa wanaagsan inaad isu diyaariso in lagu ogolaado iyo in codsigaada la diido. Haddii aad hesho deggenaasho waa inaad sida ugu dhaqsaha badan leh u barataa afka iswiidhishka, u heshaa shaqo isla markaana u debertaa masruufkaada. Waxaan kaa caawineynaa wadaad mari laheyd.
La qabsashada iyo shaqo ka helida dalka Iswiidan
Waa muhim inaad ka qeyb qaadato howlaha kuu hogaamin karo helitaanka shaqo. Haddii caafimaadkaada ama naafo ay saameyn ku yeelanayaan waxbarashadaada, shaqadaada ama howlahaada waxan dooneynaa inaad noo sheegto taa. Si wadajira ayeynu markaa kuula baareynaa nooca gargaarka aad u baahan tahay si aad sida ugu wanaagsan ugu fuliso howlahaada. Wax intaa dheer ka aqriso warbixinta warqaddan.
Warbixin ku saabsan gargaarka la xiriira shaqada iyo baxnaaninta
Miyaa adiga kaalmo u baahantahay sidaa ugu qeyb-qaadankartid dhaq-dhaqaaqyada xafiiska shaqada?
Isu diyaarinta shaqo ee Iswiidhen
Jobskills waa qalab dijitaala ee sida loo muujin lahaa waaya aragnimadaada iyo awoodaada xirfadeed.
Aqriso wax intaa dheer ee ku saabsan Jobskills
Halkan ayaad adigaaga leh qorshe degitaan ku soo sheegi kartaa maqnaansho. Maqnaansho waxaa halkan loola jeedaa cudur ama daryeel carruur xanuunsan (VAB).
Gudbi Warbixinta Bilaha ah
Hadii aad qayb ka tahay qorshaha degenaashaha (etableringsplan) halkan ayaad ka buuxin karta warqada bisha ood ka diri karta.
Tusaalaha isticmaalka foomka dijitaalka ah ee warbixinta bisha
Gargaar noocee ah baan heli karaa
Nooca gargaarka saxadaah ee aad naga heli karto waxey ku xiran tahay sida inaad leedahay sharci deggenaasho ama inaadan laheyn sharcigaa iyo dalka aad ka timid.
Nala soo xiriir si aad u ogaato waxa adiga ku quseeyo.
Warbixinta bulshada iswiidhishka
Warbixin Iswiidhen (Information Sverige) waa bog internet oo loogu tala galay adiga ku cusub Iswiidhen si aad si sahlan oo dhaqsa ah ugu hesho warbixinta ku saabsan bulshada Iswiidhishka.
Haggidda ajnabiga jaamiciga ah
Dib u bilow (Omstart) waa bog internet oo ku saabsan suuqa shaqada iswiidhishka oo loogu tala galay adiga soo dhigtay jaamacad ama machad sare ee dal kale oo aan aheyn Iswiidhen.
Ugu hel qiimeyn Iswiidhen waxbarashadaada ajnabi
Hey’adda jaamacadaha iyo machadyada sare (Universitets- och högskolerådet) ayaa qiimeysa waxbarashada dalalka kale taasoo ah gargaarka qofka shaqo doonka ka ah Iswiidhen, ama doonayo inuu sii wato waxbarasho ama ah shaqo bixiye doonayo inuu shaqaaleeyo qof wata shahaado ajnabi.
Hey’adda jaamacadaha iyo machadyada sare (Universitets- och högskolerådet)